Unokufumana njani iiplani zangaphandle eziphezulu ze-PR ngokusebenzisa uphando lwe-backlink?
Eli nqaku lixhomekeke kumxholo onokuthi uphicothole ubukho bekhonkco yakho yekhonkco kunye neendlela ezibuyiselwa ngayo uphando olungakhulisa isikhundla sakho kwisayithi kwi-SERP. Kukho umzekeliso omnye ochaza ngokugqithiseleyo ukhuphiswano kumakethi yedijithali - "Gcina abahlobo bakho basondele kwaye iintshaba zakho zisondele. "
Nawuphi na umkhankaso wokwenza umsebenzi ophumeleleyo, oqhutywe ngokutsha ngabachwephesha be-SEO ochwepheshe beqala ngokuphandlelwa kwe-backlink nophando kunye nokuhlalutya. Uphando lwe-backlinks ye-niche umncintiswano luvumela ukuba ukhawule ngokukhawuleza imithombo yewebhu yomqhubi kunye nokufumanisa okubalulekileyo kwimisebenzi yakho ye-intanethi ye-backlink engayisebenzisela ukuphuma ngaphandle.
I-backlink ihlala ingundoqo ye-website nokwenza ukuba ibe nzima ngakumbi. Iwebhusayithi kufuneka ifumane iinqununu eziliqela zayo ukwakha isikhundla sayo segama elingundoqo.
Kwiminyaka elishumi edlulileyo, ukudibanisa isakhiwo kuye kwatshintsha kakhulu kwaye kwafumana nzima kunzima. Musa ukukholelwa kula "iingcali" ezibiza ukuba ukudibanisa isakhiwo ngumsebenzi olahlekileyo. Lihlala liyingxenye ebalulekileyo yobugcisa bewebhusayithi kwaye ibuye ivelise ixabiso ekukhuthazeni ishishini kwi-intanethi. Into kuphela kukuba ugxininiso kwisakhiwo soqhagamshelwano sitshintshiwe. Kule mihla, igunya lezinto eziphathekayo ezibhekiselele kwisiza sakho yinkalo enye ye-backlinks quality.
Kulo nqaku, siya kukubonisa indlela yokuqhuba uhlalutyo lwe-backlink nokhuphiswano kunye nendlela yokufumanisa apho umthombo wakho wewebhu unokufumana kalula ijusi yelinki ephezulu.
Yakha igunya lakho le-domain
Ukufumanisa ukhuphiswano lwakho, unokuqhuba uphando lwe-Google lwenkonzo enikezelwa yoshishini lakho. Phanda iziphumo ze-TOP10 ngenye yezinto eziphezulu zokucinga zamanani kwaye uzifake kwi-spreadsheet. Olu luhlu luya kubakho abaqhubi be-TOP niche. Ngaphezu koko, unokuqhuba uphando lweGoogle oluhlobene: "umbuzo wakho". I-Google iya kunika uluhlu lweeayithi ezihambelana niche.
Nangona kunjalo, unokuqhuba uphando lwe-backlink ngakumbi ngokusebenzisa iSemalt Web Analyzer. Kuza kunika uluhlu oluchanekileyo lwe-domain ekhuphisanayo, ukubonisa i-rankings, ukuguqulwa kunye nolunye ulwazi olubalulekileyo oluza kukunceda ukuba uqonde indlela ongaphaya ngayo umqhubi wakho. Ngaphezulu, unokujonga ukhuphiswano lwamaphepha ewebhu, kunye ne "gap content" phakathi kwabo kunye nokhuphiswano.
Kunengqiqo ukuhlolisisa ngamnye umqhubi wakho we-TOP5 ukuba abone ukuba ngaba baxhomekeke kwi-niche yakho kwaye basebenze kwisikali sakho.
Ukusebenzisa izixhobo zokuhlalutya kwezobugcisa, ungasetha kwakhona izilumkiso ze-backlink zezaziso zangeveki eziza kubika kuzo zonke izixhumanisi zangaphandle ezivela kwi-URL ekhuphisanayo.
Udinga ukuhlenga kwi-URL nganye ye-URL ye-competitor domain ukuze ufumane ithuba lokubuyela emva kwimixholo yegama, iindawo ezidibanisa eziliqela kwi-domain efanayo, izixhumanisi ezabelwana ngazo phakathi kwabaqhubi bakho kunye nezidumbu ezifayo Source .